ESI KPOCHAPỤ WINDO NA WINDOWS 7 - WINDOWS - 2019
Ihichapu nchekwa na Windows 7
Kọmputa Hibernate - ihe arụmụka. Ọtụtụ ndị ọrụ na-ewepụ ya, na-eche na ọ na-akpata ọtụtụ nsogbu, na ndị nwere ike ịghọta uru nke atụmatụ a, enweghị ike ime ma ọ bụrụ na ọghị. Otu n'ime ihe kpatara "enweghị mmasị" nke ọnọdụ ihi ụra abụghị okwu ndị dị otú ahụ mgbe kọmputa na-abanyekarị na ya, ma ọ gaghị ekwe omume iji nweta ya na steeti a. Ị ghaghị ịchọta redireghachi a manyere, ịhapụ data a na-azoputaghi, nke na-adịghị mma. Kedu ihe ị ga-eme iji gbochie nke a ime?
Ngwọta maka nsogbu ahụ
Ihe mere kọmputa anaghị esi na-ehi ụra nwere ike ịdị iche. Akụkụ nke nsogbu a bụ mmekọrịta chiri anya na njirimara nke ihe ngwanrọ kọmputa. Ya mere, o siri ike ikwu otu algorithm nke omume maka ngwọta ya. Ma ka ị nwere ike ịnye ọtụtụ ngwọta ndị nwere ike inyere onye ọrụ aka ịkwụsị nsogbu a.
Nhọrọ 1: Lelee ndị ọkwọ ụgbọala
Ọ bụrụ na enweghị ike ịmepụta kọmputa na ọnọdụ ụra, ihe mbụ ị ga-ahụ bụ nhazi nke ndị ọkwọ ụgbọala na ngwaọrụ. Ọ bụrụ na ọkwọ ụgbọala ọ bụla na-arụ ọrụ na njehie, ma ọ bụ na-apụghị, usoro ahụ nwere ike ịghọ ihe na-adịghị ike, nke nwere ike ịkpata nsogbu na ịhapụ ọnọdụ ụra.
Ị nwere ike ịlele ma ọ bụrụ na ndị ọkwọ ụgbọala niile arụnyere n'ụzọ ziri ezi. "Onye njikwa ngwaọrụ". Ụzọ kachasị mfe iji mepee ya bụ site na mmemme mmepe window, na-akpọ ya na-eji isi nchikota "Merie R" ma dee ebe ahụ iwudevmgmt.msc.
N'ime listi nke a ga-egosipụta na windo nke gosipụtara, a gaghị etinye ndị ọkwọ ụgbọala na-ezighị ezi, yana ederede, akara akara akara "Ngwaọrụ Amaghi Ama"egosi na akara ajụjụ.
Lee kwa: Chọpụta ihe ndị ọkwọ ụgbọala chọrọ iji arụ ọrụ na kọmputa gị
E kwesịrị ilebara onye ọkwọ ụgbọala ntanetị anya nke ọma, ebe ọ bụ na ngwaọrụ a nwere ogo nke nwere ike ịkpata nsogbu na ịhapụ ọnọdụ ụra. Okwesighi nani na ị ghaghi idozi na ọkwọ ụgbọala n'ụzọ ziri ezi, kamakwa ị ga-emelite ya na nke kachasị ọhụrụ. Iji kpochapụ onye ọkpụkpọ vidiyo dị ka ihe kpatara nsogbu ahụ, ị ​​nwere ike ịnwa ịbanye ma kpọtee kọmputa site na ọnọdụ ụra site na ịwụnye kaadị vidiyo ọzọ.
Hụkwa: Melite NVIDIA ndị ọkwọ ụgbọala vidiyo
Ngwọta maka nsogbu mgbe ị wụnye ọkwọ ụgbọala NVIDIA
Ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala site na AMD Catalyst Control Center
Ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala site na AMD Radeon Software Crimson
Njehie njehie "Ọkwọ ụgbọala ọkwọ ụgbọala kwụsịrị ịzaghachi ma weghachite ya"
Maka ndị Windows 7 ọrụ, a na-emekarị nsogbu ahụ site na isiokwu arụnyere. Aero. Ya mere, ọ ka mma ịgbanye ya.
Nhọrọ 2: Lelee ngwaọrụ USB
Ngwa USB na-abụkarị ihe na - akpata nsogbu na kọmputa site na nhụsianya. Mbụ niile ọ na-eche banyere ụdị ngwaọrụ dịka keyboard na òké. Iji chọpụta ma nke a bụ eziokwu ahụ, ị ​​ga-egbochi ngwaọrụ ndị a site na iwepụ PC gị na ụra ma ọ bụ na-eme ka ịchọọ. Maka nke a, ịchọrọ:
Chọta òké na listi njikwa ngwaọrụ, pịa aka nri iji mepee menu ndokwa ma gaa mpaghara "Njirimara".
Na njirimara nke òké, mepee ngalaba "Njikwa Ike" ma kpochie igbe ahụ kwekọrọ.
A ghaghị ime otu usoro ahụ na keyboard.
Ntị! Ị nweghị ike iwepu ikikere iji wepụ kọmputa na ọnọdụ ụra maka igusi na keyboard n'otu oge ahụ. Nke a ga-eduga na enweghị ike itinye usoro a.
Nhọrọ nke 3: Gbanwee ike atụmatụ
N'ụzọ dịgasị iche iche, kọmputa ahụ na-abanye n'ime ọnọdụ ọgba aghara, ọ ga-ekwe omume ịgbanyụ ngwa ngwa. Otú ọ dị, ọ bụrụ na i si na ya pụọ, ike na-emekarị oge, ma ọ bụ HDD anaghị agbanye ma ọlị. Ndị nsogbu nke Windows 7 na-emetụta nsogbu a karịsịa. Ya mere, iji zere nsogbu, ọ ka mma iji gbanyụọ njirimara a.
Na nchịkwa akara na ngalaba "Akụrụngwa na ụda" gaa ịkọwa "Enyemaka Ike".
Gaa na ntọala nke ọnọdụ ihi ụra.
Na nhazi usoro ikike pịa na njikọ "Gbanwee ntọala ikike dị elu".
Tọọ ntọala "Gbanyụọ Mgbapụ Site" efu efu.
Ugbu a ọbụlagodi na kọmputa "na-ehi ụra", a ga-agbanye ụgbọala ahụ n'ọnọdụ nkịtị.
Nhọrọ 4: Gbanwee Ntọala BIOS
Ọ bụrụ na akaebe ndị a adịghị enyere aka, kọmputa ahụ ka na-esiteghị na ọnọdụ ụra, ịnwere ike ịnwale dozie nsogbu a site n'ịgbanwe ntọala BIOS. Ị nwere ike tinye ya site na ijigide igodo ahụ mgbe ị na-agbanye kọmputa ahụ "Hichapụ" ma ọ bụ "F2" (ma ọ bụ nhọrọ ọzọ, dabere na version BIOS nke motherboard gị).
Ihe mgbagwoju anya nke usoro a bu n'eziokwu na na nsusu di iche iche nke ngalaba BIOS na ike ikike nwere ike ibu ihe di iche na iwu nke omume onye puru iche. N'okwu a, ịkwesiri ịdabere n'ihe ị maara banyere asụsụ Bekee na nghọta zuru oke banyere nsogbu ahụ, ma ọ bụ kpọtụrụ ihe ndị dị n'okpuru isiokwu ahụ.
Na nke a, ngalaba nchịkwa ikike nwere aha "Nchịkọta Njikwa Ike".
Na ịbanye na ya, ị kwesịrị ịṅa ntị na oke "ACPI kwụsịtụ ụdị".
Nke a nwere ike inwe ụkpụrụ abụọ na-ekpebi "omimi" nke kọmputa na-aga ihi ụra.
Mgbe ịbanye ọnọdụ ehi ụra na S1 ihe nlekota, diski ike na ufodu kaadị ebuwanye ga-agbanyụ. Maka ihe ndị fọdụrụnụ, a ga-ebelata oge eji arụ ọrụ. Mgbe ị na-ahọrọ S3 ihe niile ma e wezụga RAM ga-enwe nkwarụ. Ịnwere ike ịme egwuregwu na ntọala ndị a ma hụ otú kọmputa ga-esi na-ehi ụra.
N'ịkọkọta, anyị nwere ike ikwubi na iji zere njehie mgbe kọmputa maliteghachiri ịbanye na nzuzo, ọ dị mkpa iji nlezianya hụ na ndị ọkwọ ụgbọala kacha ọhụrụ na-arụ ọrụ. I kwesịghị iji software na-enweghị ikikere, ma ọ̄ bụ ngwanrọ sitere na ndị na-emepụta ntụrụndụ. Site na ịgbaso iwu ndị a, ị nwere ike hụ na arụ ọrụ niile nke PC gị ga-eji mee ihe n'ụzọ zuru ezu na oke arụmọrụ.